Onye na-elekọta obere akpa Vibes: Cross-Platform Mobile obere akpa | Martech Zone
Onye na-elekọta obere akpa Vibes: obere akpa Mobile-Platform
Monday, September 23, 2013 Sọnde, Septemba 22, 2013 Douglas Karr
Vibes wepụtara Onye njikwa obere akpa, a cross-ikpo okwu mobile obere akpa ngwọta, dị ka akụkụ nke ha Catapult mobile ahịa n'elu ikpo okwu. Mgbasa ozi azụmaahịa na-adabere na nha anya na ọdịnaya nwere ike. Nsonaazụ na-adịwanye mma mgbe onyinye dị mkpa maka ihe onye ọrụ na-eme, mgbe ha na-eme ya na ebe ha dị. Abụọ Passbook na Google Wallet Object APIs abanyela na Wallet Manager.
Dị ka Onye njikwa obere akpa peeji nke ngwaahịa:
Mepụta - Jiri obere njikwa nke ngwaọrụ iji mepụta ọdịnaya obere akpa gị na nkeji. Ọ dị mfe dịka ịhọrọ ezigbo template maka mkpọsa gị wee jiri ngwaọrụ anyị na-edezi ịhọrọ agba, bulite onyonyo gị na akara ngosi, pịnye mpaghara ederede na ndị ọzọ. Enweghị koodu nzuzo, enweghị ọgba aghara na onyinye obere akpa gị na-eweta ozugbo.
Kesaa - Wallet Manager na-eburu teknụzụ nchọpụta ngwaọrụ Catapult SmartLink, nke na - enyere gị aka izipu onyinye obere akpa mkpanaka gị n’elu ikpo okwu ọ bụla - na - ebugharị Passes na iPhones, Google Wallet Object na ekwentị gam akporo, yana ọdịnaya weebụ na ekwentị mkpanaaka na ngwaọrụ ndị ọzọ.
jikwaa - Ozugbo ndị ahịa gị zọpụtala onyinye gị obere akpa gị na ekwentị ha, ịnwere ike iji obere akpa ka ịwelite mmemme arụnyere yana mmemme iguzosi ike n'ihe. Kpatụ na nkwanye nkwukọrịta ọrụ nke obere akpa mkpanaaka iziga ndị ncheta ndị ahịa gị, iji weghachite ndị na-agbabeghị asambodo iguzosi ike n'ihe ha ma gbanwee ma ọ bụ melite onyinye iji gosipụta nnweta ngwaahịa.
-ebuli - Leverage data na nchịkọta, nkewa ma tinyeghachi ndị ahịa gị dabere na omume ndị gara aga na ọkacha mmasị nke ekwentị. Mee ka nọmba mgbapụta gị dịkwuo mma site na ịgbanwe onyinye mgbe ha ka nọ n'ahịa.
Tụọ - nweta nghọta n'ime mkpọsa obere akpa gị. Tụọ ọnụọgụ pịa, nweta visibiliti n'ime ọdịnaya echekwara ma ehichapụ, na ndị ọzọ. Jiri data bara uru iji gosipụta ROI. I nwekwara ike iwekota nke gị ụlọ ahịa, ahịa POS na data mgbapụta na Catapult iji mechie akaghị na mmemme obere akpa gị.
Tags: katapilagoogle gafereintegrated mobile obere akpaiphone ngafeobere akpa iphoneobere akpa mkpanakaOgbenwaigweonye njikwa obere akpa